Kuthetha ukuthini ukuba ii-coffin zomntu oshonile ziphuphayo: abafileyo emagqatsini, umfi wavuka ebhokisini
Ukuphatha amaphupha apho ubona ibhokisi kunye nomfi
Uninzi lwabantu, bebona ibhokisi kunye nomntu oshonile ephupheni, phawula oku njengophawu olubi. Kodwa eqinisweni, oku akunjalo ngaso sonke isikhathi. Ngokuqinisekileyo, kukho ukuchazwa kakubi, kodwa ukuqonda kakuhle intsingiselo yobuthongo, kufuneka uqwalasele ezininzi iinkcukacha zayo.
Yintoni eyenzekayo xa ibhokisi liphethe amaphupha afi? Yintoni iphupha lokuphila efile ebhokisini Ziziphi iindwendwe ezifayo zibonayo ebhokisini
Yintoni eyenzekayo xa ibhokisi efile liphupha?
Ngokuqhelekileyo kukho uluvo lokuba amaphupha anjalo afanekisela ukufika kwangaphambili kweendwendwe ezilindele ixesha elide. Intlanganiso iza kuzisa uvuyo kunye nemizwa emihle. Ukusuka kwenye imbono, umbono ungathetha imiyalezo engalindelekanga.
Ukufaka ibhokisi kunye nomntu ofileyo uthembisa inzuzo yezemali. Kodwa akuyi kuba yinto engalindelekanga. Kunoko, uya kufumana umvuzo wemisebenzi yomsebenzi omde kunye nobunzima.
Ukubona kwiphupha olilele ebhokisini, ithi inani elikhulu lezithintelo likuthintela ukuba ufezekise umnqweno owufunayo. Kodwa musa ukuphelelwa yithemba nokuyeka. Incwadi yephupha ithi nakuba kukho ubunzima, uya kukwazi ukunqoba yonke into kwaye ufezekise into oyifunayo xa wenza yonke imizamo.
Ukutshisa ephusheni ibhokisi elivaliweyo lifanekisela umnqweno womphuphi ukulibala isiganeko esingathandekiyo ebomini, nangona oku kusenakwenzeka. Kodwa ukumba ibhokisi evaliweyo - ekufumaneni kweminye imfihlakalo.
Ukubona ephupheni ibhokisi elinomntu oshonile endlwini yakhe, ngaphezu koko, kwaye lijikelezwe ngeentyantyambo, libonisa umntu ongenasiphelo ubomi bentsapho. Kwabo sele benesidleke sawo, kunokubonakalisa iingxabano kunye nokuxabana okukhulu.
Ibhokisi elivulekile linentsingiselo engalunganga. Indoda iya kujamelana neemvavanyo ezininzi, kodwa akayi kukwazi ukuthatha nawaphi na amanyathelo okubaphephe. Ngoko ke, kungcono ukulungiselela ubunzima obunjalo ngokuziphatha kunye nokulinda ixesha lokungaphumeleli.
Ukuphupha indoda efile ebhokisini
Kutheni abantu abafayo behlala ebhokisini
Ingcaciso ecacileyo kakhulu inikwa incwadi yaseTshayina yokuphupha i-Zhou-gun:
Ukufika okungalindelekanga kwenani elikhulu leendwendwe, eliza kuzisa uvuyo.
Ixabiso elibonakalayo lempahla.
Ukuba umntu oshonile wasuka ebhokisini waza waqala ukuthetha nomphuphi, ngoko oku kubi. Kubalulekile ukulungiselela uchungechunge lweengxaki, ngoko kungcono ukuba uzame ukuthetha nomntu oshonile nonke ephupheni, kwaye ukuba uqale ukwenza oku, nciphisa intetho kwinani elincinci.
Umntu ofile ovuselelekileyo, obeka izandla zakho kuwe, naye unomxholo ongalungileyo. Ukungonwaba kungawa ngokukhawuleza kumntu. Ngokudla kaninzi ukubuyisela umntu owaziwayo kuwe, iingxaki zempilo ezinzulu okanye ukuhlaselwa ngabangenayo.
Kutheni iindwendwe ezifayo kwibhokisi
Nawaphi na ukufika kweentsapho ezifikile kumaphupha ethu kuphakamisa imibuzo emininzi. Kodwa ungesabi, kuba ngokuqhelekileyo isalathisi esifanayo sinesimangaliso, apho kufuneka uphulaphule.
Ubaba osekupheleni kwebhokisi uyalumkisa ngengozi kwimeko esanda kuqaliswa.
Umama kule mephu amaphupha ukulumkisa umphuphi weengxaki zempilo ezizayo.
Umzalwana ofileyo ufuzisela uncedo. Mhlawumbi, enyanisweni, omnye umntu omaziyo naye unqwenela kuwe ukuxhasa. Ungamkeli kwaye ububele bakho buya kuhlawula.
Ukuba umhlobo oswele ixesha elide uye waphupha, kwaye ephupheni uzama ukukuxelela okuthile, uyiphulaphule ngokuphulaphule icebo lakhe lokuthintela isaphulelo esibi kwi shishini.
Naliphi na iindwendwe ezifayo, ngokukhawuleza zivuselele ebhokisini, ithathwa njengesilumkiso. Kufuneka ukhangele ngokukhawuleza abantu abazama ukukubandakanya kumashishini athile. Inokwenzeka ukuba, awuyi kuzuza nayiphi na inzuzo kule nto, kwaye ulahlekelwe yodwa imali yakho.
Intlanzi kunye neetamatati, iparsley kunye nemon
Ubudlelwane kubasebenzi basekuhlaleni
UCarrie Fisher, owayedlala uNdunankulu uLeia, wafa e-US
Iimpawu ze-red caviar
Dima Bilan: Ndididekile kubantu abaninzi
Ukugqweswa kwezifundo ezikolweni